Kalfadhigii u danbeeyey ee Baarlamaanka Puntland oo qabsoomi waayey! • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Kalfadhigii u danbeeyey ee Baarlamaanka Puntland oo qabsoomi waayey!
Kalfadhigii u danbeeyey ee Baarlamaanka Puntland oo qabsoomi waayey!
October 30, 2018 - By: HORSEED STAFF
Baarlamaankii shanaad ee Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland yeelato ayaa lagu wadey in Kalfadhigii 40aad ee Golaha Wakiilada Puntland uu qabsoomo bishan Oktoobar. Kalfadhigan ayaa ahaan jirey midka ugu wakhtiga yar marka la eego kuwii hore waxaana lagu ansixiyaa Miisaaniyadda kumeel-gaarka ah ee bilowga sanadka doorashada kadib, marka ay Xildhibaanadu ansixiyaan Misaaniyadda, ayaa Madaxweynhu kala diri jirey maadaama xiligii dhamaadey, waxaana badankood ay dib ugu noqon jireen gobolada si haddii ay heli karaan mar kale dib loo soo doorto.
Xeer hoosaadka Golaha Wakiilada Puntland waxa uu dhigayaa in ay yeelanayaan laba kalfadhi sanadkasta kuwaas oo ku beegan 25 Oktoobar iyo 15 Juun.
Haddaba sida muuqata Bisha Oktoober waxaa ka dhiman saacado kooban, waxaa la is weydiinayaa haddii kalfadhigu furman waayo 31 Okt 2018 sababta baajisey iyo waxa laga yeelayo Miisaaniyadda bilowga sanadka 2019?
Sida ay qabaan sharciyaqaanadu haddii kalfadhigu la dhaafo Xildhibaanada xiliga xeerku siinayo waxa uu noqonayaa fadhi kasta oo ay yeeshaan “Kalfadhi aan caadi ahayn”, kaas oo looga doodi karo Miisaaniyadda.
Maxay tahay sababta keentey in kalfadhigu uu baaqdo?
Waxaa jira arrimo badan oo is biirsadey waxaana ugu weyn iyada oo Xildhibaano ka badan 15 ay todobaadyo ka hor u soo ololeynayeen in dastuurka la furo, si wax looga beddelo tirada Xildhibaanada baarlamaanka iyo weliba qodobo kale, taas oo baarlamaanku diidey mar sii horeysey. Qodobkan oo ay ka digeen qaar kamid ah Xildhibaanada golaha Wakiilada ayaa ku noqdey caqabadda u weyn ee Baarlamaanku u furami waayo, Shir gudoonka golaha Wakiilada ayaa ku kala qaybsan, waxaana qaarkood u arkaan in ay tahay “Lugtii oo jeeniga dhaaftey” in Xildhibaano kuwii beddeli lahaa ay diyaarsan yihiin in ay fara gashtaan oo burburiyaan wixii keliya ee dalka u harsanaa, waxaana intooda badan ay aaminsan yihiin in ay tahay hawl u taala kuwa iyaga bedalaya.
Qodobka labaad ee kalfadhigu u baaqdey ayaa ah in Wasaaradda maaliyaddu aysan soo diyaarin Miisaaniyadda kumeel-gaarka ah ee saddexda bilood ee u horeysa 2019.
Kalfadhiga maanta baaqday ayaa lagu soo xirayay kalfadhiyadii mudada shanta sano ku dhow ee baarlamaanka , madaxwaynaha Puntland ayaa la filayay inuu khudbad uu ka hor jeediyo, kuna cadeeyo in uu yahay Musharax mar kale xilka u ordaya, iyada oo Puntland mareyso xaaladii ugu liidatey mudadii jiritaankeeda marka laga reebo 2001-2002.
Sidaan oo kale ayaa Kalfadhigi u danbeeyey sanadkii 2013 uu baaqdey, sababta ayaa ahayd in la waayey Kooram buuxin kara in kalfadhigu furmo 30 Okt 2013 ayaa madaxweyne Faroole isugu yeeray oo kala direy Baarlamaanka isaga oo u jeediyey Khudbad, mana dhicin in Xildhibaanadu ay yeshaan kalfadhi caadi ah.
Golaha Wakiilada ee Puntland ayaa ka kooban 66 Xildhibaan kuwaas oo 32 kamid ah ay ahaayeen Xildhibaanadii 2009-2014 oo mar kale dib loo soo celiyey, waxaana kamid ah Xildhibaano kale oo aan calankoodu dhicin kuwaas oo ah tiro aan yareyn. Golaha Wakiilada waxaa kamid ah 2 gabdhood oo keliya, halka baarlamaankii u horeeyey ay ku lahaayeen 5 gabdhuhu, waxaa sanadkan la is weydiinayaa tirada Xildhibaano ee dib u soo noqon doonta.
In badan oo kamid ah shacabka Puntland ayaa aaminsan in halka Puntland ay ka dhaqaaqi weydey uu yahay Aqalka Golaha Wakiilada, iyo Madaxweynayaal aan ka soo bixin ballan qaadkooda, waxaana shacabku dalabanayaan in la keeno Xildhibaano xilkas ah oo la imaan kara maamul wanaagsan iyo isla xisaabtan.